China Hot Line Clamp orinasa sy mpanamboatra | Waxun
*Clamp amin'ny tsipika mafana dia fitaovana mivantana mifanentana amin'ny fifandraisana amin'ny paompy fizarana. Ny firafitry ny vy sy ny firaka alimika dia manome tanjaka mahery, fanoherana ny harafesina ary fitoviana amin'ny conductor.
* Ny sakan'ny valanoranony dia midika hoe fifandraisan'ny mpitantana tsara, fihenan'ny maripana iraisana, fikorianan'ny hatsiaka kely ho an'ny mpanamory ary hampihenana ny familiana ny mpitarika mandritra ny fametrahana azy.
* Ny endri-javatra feno lohataona dia manonitra ny fikorianan'ny hatsiaka sy ny fanamafisana ny hovitrovitra avy amin'ny tselatra.
* Ny vodi-mason'ny maso dia manome tanjaka maimaim-poana ary fanitarana fanamiana eo am-pamoahana.
* Ny fifandraisana misy eo amin'ny paompy dia manakana ny mety hitrosan'ny conducteur na clamp amin'ny fifandraisana bimetal.
* Ny fanandramana Sikile amin'izao fotoana izao mahomby isaky ny ANSI C119.4 dia manome toky fa ny fikafika fantsom-pifandraisana MPS dia hahatanty ny fahamatoran'ny fifandraisana napetraka tsara.
Ho an'ny mpitarika Aluminium sy ACSR.
• Natao ho an'ny fampiharana "hot stick" mahazatra.
Vatana sy mpihazona - Alloy Aluminium
Eyebolt - firaka varahina - nopetahany takela-by
Eyestem - firavaka alimo, vy sandoka na vy tsy misy fangarony
Lohataona (amin'ny eyestem) - Stainless Steel
Teo aloha: Clamp vita amin'ny tsipika aluminium mafana
tsipika tap mafana clamp
mpampitohy tsipika mivantana